ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း လာမည့် Blair စုန်းမ၏စီမံကိန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အတူတောအုပ်သို့ပြန်သွားပါ
လာမည့် Blair စုန်းမ၏စီမံကိန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အတူတောအုပ်သို့ပြန်သွားပါ
by admin ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2015
ကရေးသား admin ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2015
Whether you love it, fear it or hate it, there’s no denying that တိုနီဘလဲစုန်းမစီမံကိန်း is one of the most influential and groundbreaking films in the history of horror. Released in 1999, the low-budget film is credited for kick-starting the found footage sub-genre – and we encourage you to not blame it for the 10,001 copycats that came in its wake!
There are few horror films that have genuinely terrified audiences more than တိုနီဘလဲစုန်းမစီမံကိန်း, which had suchabrilliant marketing campaign that many were initially convinced it wasawork of non-fiction. Though we of course now know the truth, it’s still as potently terrifying as ever, nearly two decades later.
ကျနော်တို့စောင့်နေစဉ် The Blair Witch Project 3, it’s just been revealed thatadocumentary about the original film is on its way. Aptly titled The Woods Movie, the feature length doc will take you behind the scenes of the iconic film’s creation, offering unprecedented access to the phenomenon.
[vimeo id =” 119458718″]
ထိတ်လန့်မူလစာမျက်နှာလာ: ဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2015
ဂြိုလ်သားများအာကာသစခန်းကြီးကိုသတိပြုပါ။ Reality Show မှလူသားများကိုအင်္ဂါဂြိုဟ်သို့စေလွှတ်ခြင်း